Yakasimbisa iro Dambudziko rekurovedza muviri kweinotevera Kukadzi 8 | Ndinobva mac
Apple yakaburitsa maawa mashoma apfuura kusimbiswa kweiyo dambudziko ratakatotaura nezvaro raizowanikwa mamwe mazuva apfuura. Mune ino kesi idambudziko rekurovedza muviri ratinozofanira zadzisa ringi yekurovedza kwevhiki rese uye izvi zvichatanga muna Kukadzi 8 kune vese vashandisi.
Izvo ndezve kuita chiitiko chemuviri kwehafu yeawa panguva yega yega yemazuva evhiki, kupedzisa mazuva manomwe atinotora mukombe uyo mune ino nyaya yakafanana neyakaitika gore rapfuura mukushorwa Mwedzi weMoyo. Tichavawo nematanho anoenderana ekugovana kubva kuapp meseji.
Gore rino zvimwe zvitoro zvine zvakare Nhasi paApple chiitiko
Tinogona kutaura kuti pamusoro pechinetso ichi, vese vashandisi vari pasi rese vane Apple Watch vachakwanisa kuita, kambani inoita kuti vashandisi muSan Francisco, Chicago neNew York, vateedzere zvikamu zvakati kugovana zviitiko navanachiremba, vamwe vatambi uye mamaneja eApple hutano pakati pevamwe hunhu kubva kune zvemitambo. Izvi zvikamu zvinorambidzwa mumaguta aya uye zviri pachena ivo vanozove vakasununguka kune vese vanopinda.
Ichi chinongova chimwe chikonzero chekurovedza muviri, chiri chinhu chakanaka kwatiri uye isu tinofanirwa kuzviziva. Kupedzisa mhete kana kuisa mhando idzi dzezvinangwa kunotikurudzira kuti tifambe zvakanyanya uye pasina kupokana ivo kurudziro yakanaka kune avo vasingaite zvemitambo nguva dzoseZvisinei, icho chinhu chinobatsira hutano hwedu, saka ngatifambe!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kudzidzira kurovedza kwakasimbiswa muna Kukadzi 8
Twitter inogumisa mapuratifomu kuti atore vateveri nekuvharira kwavo kupinda pasocial network